आजको सहयात्रामा वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल (प्रोमो सहित) « SahayatraTV -Nepal News Portal, Business, Hot News, Interview, Opinions, Politics, Science, Technology, Social, Media, Sports, Youth, Model Watch, Movies
आजको सहयात्रामा वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल (प्रोमो सहित)
Published on: 17 September, 2018 4:21 pm
काठमाण्डौं । असोज–१, चन्दा प्रोडक्सनद्धारा निर्मित कार्यक्रम सहयात्रमा आज बरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा.भोला रिजालसंगको विशेष अन्तवार्ता नेपाल टेलिभिजनवाट प्रशारण हुँदैछ । विभिन्न सामाजिक विषयवस्तुहरु समेटि साप्ताहिक रुपमा प्रशारण हुने कार्यक्रम सहयात्रामा आज डा. रिजालसँगको सहयात्रा सम्वाद प्रशारण हुने भएको हो ।
डा. रिजालसँगको अन्तवार्ता नेपाल टेलिभिजनबाट आज असोज १ गते साँझ ५ः३० बजे र पुनः प्रशारण असोज २ अर्थात मंगलबार बिहान १०ः३० बजे प्रशारण हुनेछ । नेपालमै पहिलो पटक टेस्ट्युव बेबी जन्माउने प्रविधिको थालनी गरेर नेपाललाई विश्वमा चिनाउने डा. रिजालको अन्तवार्तामा उहांसंग जोडिएका पेसागत स्वास्थ्य पैरवी सम्वाद समेटिएको छ ।
चन्दा प्रोडक्सनकी प्रबन्ध निर्देशक चन्दा घिमिरेसंग गरिएको सो सम्वादमा चिकित्सा पेसालाई मस्तिष्क र संगीतलाई मुटु मान्ने डा. रिजालले अन्तवार्तामा गीत संगीतप्रतिको आफ्नो लगाव र झुकावप्रति पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ । डा रिजालले लामो समय देखि काम गर्दै आएको ओम अस्पताल छाडेर अन्य अस्पतालमा सर्नुको वास्तविकता पनि अन्तवार्तामा उल्लेख गरिएको छ ।